Daawo Sawirro: Wafdi ka socday DF-Soomaaliya oo Hoygiisa Ku Booqday Dr. Cali Ciise iyo Kulan dhexmaray | KALSHAALE
Daawo Sawirro: Wafdi ka socday DF-Soomaaliya oo Hoygiisa Ku Booqday Dr. Cali Ciise iyo Kulan dhexmaray
Jan 9, 2019 - 17 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Wafdigii ka socday Dawladda Soomaaliya ee maalintii shalay soo gaadhay magaalada Garoowe oo ay kamid ahaayeen Wasiiro iyo Xildhibaano ayaa maanta hoygiisa kusoo booqday Dr. Cali Ciise Cabdi.
Wasiirada kulanka la yeeshay Dr. Cali ayaa waxa akamid ahaa Wasiirka Arimaha Dibada Axmed ciise, Wasiirka Shaqada iyo shaqalaha saalax ,
wasiira kaluumaysiga cabdillaahi Bidhaan, Wasiiru dawladaha maaliyada Maxamuud xayir iyo Wasiir dawladaha boostada iyo isgaadhsiinta Cabdilaahi bile Nuur.
Sidoo kale Xildhibaanada kulanka ka Qayb galay ayaa waxaa kamid ahaa Xildhibnaan xuseen iidaw, xildhibaan cabdishakuur cali mire, xildhibaan cali xoosh iyo xildhibaan Ayuub Ismaciil.
Kulan ayaa u dhaxeeyey Intaa kor kusoo xusnay iyagoo ay kawada hadlayeen sidii ayaha iyo mustaqbalka umada looga wada talin laaha ugu danbayn kulan ayaa kusoo dhamaaday guul iyo afgarad.
Dr. Cali Ciise Cabdi ayaa lagu xasuustaa inuu Noqday Musharixii keliya ee ku dhowaaqay inaanu wax Laaluush ah bixinayn, Isagoo sheegay inaysan Suuro-gal ahayn in isagoo Wakhti dheer dagaal kula jiray Musuqa inuu maanta kusoo baxo.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (17)
War odaga ka wada Tuulada Guntu joogto, oo aan waxba ka aqoon walaal iyo Cad quurid.
Asagaaba Quraan saar u baahan markuu Tuulo yar oo Deyniile camal ah ay kursi ka soo jiriyey.
– Geeya gurigii Gobtiyo Caasimad mugweyn.
War meeshii xor bay noqotay gaal iyo islaama iman karo.awal gaas ayey u afduubnayd.
Hada ayuu Nairobi u guuri karaa si uu u tiriyo xoolihii shanta sano lagu ururinayey meesha.
Ka guro puntland deedna ka guur puntland.
Meesha waa laga dhaansadaa ka dibna waa laga dhuuntaa.
Bal aan aragno deni nin horay u soo dhaansaday ayuu u egyahay.
Hooyadii fadaalka diiday ka dib markay kuwo kale yimaadeen guul ayaan u rajaynaynaa iyo horu socod.
Isjiid jiid iyo dhago adayg hadii lagu hormarayo 30 sano ayaa lagu jiray ee 30 sano oo kale yeyna inaga khasaarin.
Kollay kuwo yurub ku saaqiday sida @lop ma ogola wada shaqeyn dawladeed.kkkk
War somalida ileen majeerteen aa hogaan u ah numan kaaba qabiil doortay ayaa websideyadii iyo tvyadii somalida qabsadey
Puntland dad dowladnimada u bisil ayaa degen, maaha dad iska orda oo dameeri dhaanraacday u codeeya.
Cali Ciise wuu hogaamn karay Puntland laakiin waxa ka qaldamay halkaan kuma soo koobi karo.
Waxaa tusaale kuugu filan in hal cod oo Dhulbahante helin, waxaan maqlay hal qof oo Majeerteen ah ayaa u codeeyey.. Ma hubo warkaas.
Dhibaayadii Taleex ka dhacday oo Somaliland ku qabsatay dhicana kale kasoo jeeday, yaa matka Dhul xoree ku aamonaya.
Maanta dhulkiisii Nugaal kusoo noqday, waana aqoonyahay boos ka weynmaayo.
Sxb meesha dhulka Somalia waa 1/3 badda waa 1/2..nus.
Dadku waa dad Somalinimo ka go’an tahay.
Furaha Waqooyi iyo Koofur labadaba haya.
Federalka iyo dawlaada dhexe laga soo abaabulay..
Idoor xayraansan ayadoo laga siinixin ayaa soo xarayn oo madaxweyne in la siiyo kasoo shaqayn.
Puntland furihii nabadda iyo horumarka Somalia ayaa yaal, dadka inta badan waa ogyihiin…
Gobolada xitaa doorashooda maqlimaysid.
Laftagreen wax sheegaya ma aragtay.
Shabeelaha hoose iyo Baay iyo Bakool..
Dhulyar maaha laakiin furaha siyaasad waxbedeli karta ma hayaan..
Marar badan baan kaa maqlay Puntland waa sedex meelood meel soomaliya marka say ku dhacday in dhulka saas u weyn ay ku noolyihiin hal jifo ama jifooyin marka laga reebo dad yar oo ku soo qaxay burburkii soomaliya.
Soo lama dhihi karo dad lala noolaan karo ma tihiin.
Gobalada soomaliya ee kale dad soomaaliyeed oo isku dhafan baa degan.
CALI CIISE WUU SOO AMBADAY!!
TII UU KU GORGORTAMI LAHAANA ISAGA & CALI KHALIIF BAA GACMAHOODA KU BURBURIYEY.HADEERAA MIDBA MAAMUL KALE HOOS JOOGAA AAWAY WAXAY DADKOODA USHEEGI JIREEN(KHAATUMO)?!!?!!?!!?
ISIS is PRO-ISRAELI.
(ISIS LEADER ELLIOTE SHIMON HE WAS MOSSAD AGENT,GO FUCK YOUR SELF YOU ARE JEWISH=ALYUHUUDIYAH)is not Muslims,sure.
DID MOSSAD DO CHARLIE HEBDO!100% inside job.
ISRAELI DID 9/11,(400 JEWISH IS ABSENTI 9/11)!why? Weerarkay ogaayeen.
Siduu maxmud shegay dorashadan samayn bey ku
Dhex yelatay dhamaan dadka somaliyed walow ay
Ahayd qabiil la qurxiyey dorka danbe waa in la hela
Dorasho dadka deganka degan ay u siman yihiin
Dr ali isse abti waa inuu dalka sii joogo oo uu wax ka
Qabto arimaha dhaqalaha oo meel xun maraya
Marka la eego puntland waxaa ka jira sixir barar
Dhib ku haya dadka danyarta ah marka ali ise waa
Inuu aqontisa uga faideya dadka somaliyed iyo reer
Maya maaha in dad lalanoolaan ka ahayn,
Sxb Somalida dhan waxaa ka badan inta ku nool London, Qaahira Egypt 25 million kunool Somali oo dhan 10 iyo xoogaa.
Puntland macal Majeerteenkii ugu badnaa ayaa uga soo guuray Xamar, Kismaayo ilaa Kenya.
Dhulka dad ma joogin dagaaladii ka hor..
Xoolo dhaqato iyo kaluumaysto ku haray..
Hal dugsi sare kuma oolin.
Walaahi in Garowe iga rumaysanayn say u ekayd markii dagaalka qarxay.
Deni iyo Gaas midna kuma dhalay Puntland, anigana kuma dhalay.. Waa dhul dad yar ku hareen, gaari loo yiqiin, macal Kacankii school xitaa ka dhisin.
Sxb Meesha hadda ayaa dadkii dani kusoo celisay..
Weli dadbaa mooda in lagu noolaan karin oo weliba Majeerteen ah..
Dabshid baa ku jira dadka mooda dudun cidla ah habeenkii geedaha laga fuulo masaska
Midkale aan kuugu daro, Puntland oo soo dhaweyn sameeyey Somalida waxaa dhisay reer Koofur, Jareer iyo Jileec iskugu jira.
Waa sirta, sababta Puntland from Nothing to powerful state u noqotay.
Sirta waxaa waaye in yihiin dad lalan oolaan karo,
Reer koofurtii Jareerta, Raxanweyn, Hawiye, qabiilada kale iyo Daaroodkii soo qaxay Koofur cidna laga xigsan.
Ganacsiga iyo meelaha ugu shidan Isaaq baa leh Boosaaso iyo Dukaamo waaweyn..Hargeysa quarter
Taas waxay keentay raggii xirfadda lahaa oo Somali cidwalba leh, ninba wuxuu yiqiin kaga shaqaysto Puntland.
Tusaale Dekedda Bossaso waxaa customka haystay nin Raxanweyn ah, dhismayaasha waxaa dhisa oo dadka ka gada rag Mushunguli ah, Airporka Garoowe formanka dhisay waa Geledi.
Xalwo hiilaal Garoowe Shaanshi leh.
Puntland 20kaan sano dhisantahay, waayo Somali oo dhan ayaa ku nabad heshay, ninwalbana aqligiisa iyo aqoontiisa wax kula soo baxay.
Horumarka Puntland sirta ka dambaysa hadda ma fahantay.
Waa dad og; maha unukaa leh in ku xigto maha unukaa kaasii leh.
Ilaahow meel Majeerteen keligiis ku noolyihiin ha i badin, waayo nolol ma ooli karto.
Brain drain and diversity ayaa horumar keena.
Kalahage nin wax og ku moodi jiray..
Ninka mooda in reer Bari dhulka dhiseen ama Xamar Hawiye dhisay… Miskiin🤔
Aniga oo ka badbadinayn..
Sirta horumarka Puntland= waa in yihiin dad lala noolaan karo oo caawa cidee tahay qofka ku oranayn, inaad waxka soo saarato, ka dhoofsato, kasoo degsato, ka ganacsato, shacabka wax u baahanyihiin ka gado, from xalwo hiilaal, jalaato to villa.. Aan cidna kaa horjoojin yaa tahay laguu dilayn ama laguu dhacayn.
Taas ayaa keentay in tuubooyinkii caasimo noqdeen.
Dadka dhulka qabiil ahaan kasoo jeeda talada uun bay hayaan.
Hadaan been sheegay: beenta i dheh!
Dad lala noolaado oo Somali ka fiican walaanan u garayn..qabiil ahaan u oran maayo.
Suaasha maadan fahmin.waan ogahay inay dad badan ku nool yihiin maagaalooyinka siiba Boosaaso intii burburka soomaliya ka dennaysay.
Waxaan ka hadlayaa dhulka baadiyaha ah maxaa loo waayey dad kala duwan oo soomaaliyeed oo isdhex yaalla marka laga tago jifooyin gaara.
Ma la dhihi karaa dad cunsuriydu ku badan tahay baa degen deegaankaa oo laga kala cararay.
Puntland macal Oromodadii ayaa isku soo sheegtay oo cidna la hadlin, maalin dhaweyd mid dhintay la helay oo la mooday in Somali dishay Policeka dadkii qabteen waxay soo ogaadeen in Oromo kale dilay..
Kuye waan la idin la noolaan karin..kkkkkll
Ma kula tahay meel hal beel degto in horumar ka jiri karo?
Beel majority waa okay laakiin keligeed isku hartay ayaga ayaa iscunin.
USC Xamar qabsatay oo ukala baxay Caydiid vs Cali Mahdi, Muse Suudi vs Filish, Caydiid vs Caato, Qanyare vs hebelow… Ayagii aakhiro isku direen, caasumadii dalka qabri la galeen…
Maha unukaa leh, Puntland taas wax ka barteen.
Orod Caawa Gaarowe tag bal in xitaa lagu fiiriyo, asakar terroriste ka baqaya in ku baaraan waa dhici kartaa.
Cidkasta ka shakiyaan way baarin.
Suaal adag ayaad i weydiinaysaa, marka waa in qiyaaso.
Waxaa tusaale kuu siin Mudug, dhulka daaqsinta sida Godod ama Degmooyinka sida Galkacyo jaahilnimo darteed, dadkaas wada dega dhiigooda ma joogsado.
Caawa nin Cumar Maxamuud ah tuulada Godod baadiyaheeda u malayn in inta reer Sacad ah kusoo hoydo hurdo ku gam’ayo, ayagana waa la mid.
Sidee nin markuu Chance kaa helo ku dilin u dhexgelin?
Taas tusaale usoo qaatay, laakiin Waad aragtay dhiiga Dhulbahante dhexdiisa qubanaya..
Anaga Cumar Maxamud iyo reer Maxamuud 2011 mar aan Addis Abeba waan ooyey markaan agoon reer Maxamud Ibrahim ah, anigana Maxamud Saleban Maxamed Ibrahim ah oo geerida 100 gaartay.. Reerkaygu laayeen aabayaashood guri ugu soo galay oo wax cadaawad ii hayn oo eedaday dhashay, hadiyad u keenay maadaama qurbaha ka imid, waxa isku dilayaan markaan weydiiyey, qof og ma jiro..Aano iyo balahaa blahaaa.
Leelkase iyo Cumar Maxamuud waa la mid dagaalo caana ayaa jira, Car- tuko, Casar-Belo, Foodya-cadde etc.
Bahararsame iyo reer Mahad meel Qoriley la yiraado… 30 rag ah geeri..sanad ka hor.
Habargidir dhexdeeda waad ogtahay..
Taas waxay keentay in jifi-jifi meel la isku oodo, ileen mar kugu bilaabayaan ma taqaanine.
Majeerteen keliya maahane iisheeg beel Somalia oo degaan u gaar ah lahayn!
Ciise Djibouti kasoo bilow, Gadubirsay, Isaaq, Dhulbahante, Warsangeli, Majeerteen, Leelkase, Awrtable, Jabargidir, Xawaadle, Baadicadde, Abgaal, Raxaynweyn…Mareexaan, Ogaaden..soco..!
Intaas qabiilo waaweyn ayagagina is aamini mayaan, waa sii kala goboqoban yihiin.
Ma jirto maanta meel qabiilo kala duwan cayshow milix yihiin Somalida Cusub oo daanyeerta ah.
Magaaloyinka waaweyn sida Hargeysa, Boosaaso, Garoowe, Xamar, Kismaayo etc..ayaa hadda xiinyo iska baaraya in Somalida isdhexgasho.
Maxaa Majeerteen keliya ku tusay?
Caawa in xero Sacad, Wisil week noolaan lahaa ma aaminsani…. LOP fulay.
Hadalka dheer saan u gaabiyo ma aqaan.
Waa sheeko xiiso leh ee aqrista, waalida qabiilka.